Cuba na mmalite aha ya | Njem zuru oke
Daniel | 15/04/2021 12:27 | Emelitere ka 15/04/2021 13:27 | Cuba
Ọ bụ agwaetiti kasị ukwuu na Antilles na otu n'ime njem nleta kachasị mma na Caribbean. Ebe pụrụ iche pụrụ iche maka ọtụtụ ihe kpatara ya na akụkọ ogologo na nke na-atọ ụtọ. Ma, Ebee ka aha Cuba si? Kedu aha ya? Nke a bụ ajụjụ anyị ga - agba mbọ idozi na post a.
Eziokwu bu na nkpuru okwu a sitere na ya Cuba o doro anya ma ọlị ma ọ bụ ihe esemokwu n'etiti ndị ọkà mmụta taa. E nwere ọtụtụ echiche, ụfọdụ ndị ọzọ nabatara karịa ndị ọzọ, na ụfọdụ n'ime ha chọrọ n'ezie.
Nke mbu, aghaghi ighota otu ihe di mkpa: mgbe Christopher Columbus Ọ bịarutere n'àgwàetiti ahụ maka oge mbụ (na October 28, 1492), ọ dịghị oge o chere na ọ na-azọ ụkwụ na kọntinent ọhụrụ. N'ezie, dị ka ngụgụ ya hiere ụzọ si dị, ala ọhụrụ ahụ pụrụ ịbụ nanị Cipango (dị ka a na-akpọ Japan n'oge ahụ), a tụleghị ohere ime baptizim n'àgwàetiti ahụ n'ụzọ ọ bụla.
Christopher Columbus bịarutere n'àgwàetiti ahụ na October 28, 1492, na-anụ maka oge mbụ okwu "Cuba" site n'ọnụ ndị amaala.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ndị Spen kpebiri ịkpọ aha nchọpụta a na aha nke Agwaetiti Juana, iji kwanyere nwa okorobịa bụ́ nwa okorobịa bụ́ John ùgwù Ndị eze Katọlik. Otú ọ dị, aha a enwetaghị. Obi abụọ adịghị ya, nke a metụtara eziokwu nke ọnwụ akaghi aka na 1497 nke onye akpọrọ ka ọ nọchie okpueze ahụ, mgbe ọ dị afọ 19.
Site na nke a, site na iwu iwu eze nke February 28, 1515, a nwara na aha Cuba bụ nke Agwaetiti Fernandina, na nsọpụrụ nke eze, mana aha ebe ahụ ejideghị. N'ezie, ọrụ gọọmentị nke ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX na-ezo aka na mpaghara a n'okpuru aha Cuba.
1 Mụ amaala
2 Nkwenye siri ike banyere mmalite nke okwu Cuba
2.1 Ozizi Portuguese
2.2 Ozi Arab
Taa nkọwa akacha anabata maka ajụjụ a “ebee ka aha Cuba si” bụ nke ụmụ amaala.
Ọtụtụ ndị Cubans nwere mmasị n'echiche bụ na aha obodo ha sitere n'okwu amaala ochie: kuba, nke e ji mee ihe n'asụsụ ndị a na-asụ Taínos. Okwu a ga-apụta "Ala" ma ọ bụ "ubi." Dabere na tiori a, ọ ga-abụrịrị Columbus n'onwe ya ga-anụ ụka a na nke mbụ ya.
Ọzọkwa, ọ ga-abụ na ndị Aboriginal ọzọ nke agwaetiti ndị ọzọ dị na Caribbean, bụ ndị asụsụ ha sitere na otu mgbọrọgwụ, ezinụlọ asụsụ Arauca ji ya.
Ebee ka aha Cuba si? Dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara si kwuo, ọ nwere ike ịpụta ugwu na ebe dị elu
N'ime otu echiche ụmụ amaala, enwere ụdị ọzọ dị iche iche na-egosi na ihe aha a pụtara nwere ike ịmetụta ebe ebe ugwu na ugwu dị. Nke a yiri ka a ga-egosipụta ebe ụfọdụ aha kwesịrị Cuba, Haiti na Dominican Republic.
Nna ahụ Bartolomé de las Casas, bụ onye sonyere na mmeri na izisa ozi ọma nke agwaetiti ahụ n'etiti 1512 na 1515, gosipụtara na ọrụ ya iji okwu "cuba" na "cibao" dịka okwu ndị ọzọ maka nnukwu okwute na ugwu. N'aka nke ọzọ, kemgbe ahụ na ruo taa aha ụmụ amaala nke Cubanacan gaa na mpaghara ugwu ndi di na etiti obodo na East.
Aha Cuba ga - abụ otu n’ime ọnọdụ ndị ọdịda ala na - akpọ obodo ahụ. N'ụzọ dị mwute, enweghị ihe ọmụma anyị ugbu a banyere asụsụ Taíno na Antillean na-egbochi anyị ikwusi nke a ike.
Nkwenye siri ike banyere mmalite nke okwu Cuba
Ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ nkwenye n’etiti ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na ndị ọkà mmụta asụsụ banyere ebe aha Cuba si, e nwere echiche ndị ọzọ na-akpali mmasị bụ ndị kwesịrị ịkpọ aha:
E nwekwara a Nkwupụta Portuguese ịkọwapụta ebe aha Cuba si, ọ bụ ezie na ugbu a anaghị echebara ya echiche. Dabere na echiche a, okwu "Cuba" sitere n'otu obodo dị na ndịda Portugal nke nwere aha ahụ.
Columbus kpụrụ akpụ n'obodo Cuba na Portuguese
"Cuba" nke Portugal di na mpaghara Baixo Alentejo, nke dị nso n'obodo Beja. Ọ bụ otu n'ime ebe na-azọrọ ebe amụrụ nke Columbus (n'ezie enwere ihe akpụrụ akpụ nke onye nchọpụta n'obodo ahụ). Echiche nke na-akwado echiche a bụ na ọ ga-abụ onye ga-eme agwaetiti Caribbean ka o cheta ala nna ya.
Ọ bụ ezie na ọ bụ nkwupụta dị ịtụnanya, enweghị akụkọ banyere akụkọ ihe mere eme.
Ọbụna karịa na mbụ karịa nke gara aga, ọ bụ ezie na o nwekwara ụfọdụ ndị na-akwado ya. Dị ka ya si kwuo, toponym «Cuba» ga-abụ mgbanwe nke okwu arabic koba. Ejiri nke a mee ụlọ alakụba ndị dome tozuru etozu.
The Arab tiori tọrọ ntọala na ọdịda saịtị nke Christopher Columbus, na Bariay bay, nke dị ugbu a n'ógbè Holguín. N'ebe ahụ ọ gaara abụ ọdịdị dị larịị nke ugwu dị n'akụkụ ụsọ mmiri nke gaara echetara onye na-akwọ ụgbọ mmiri ahụ nke nke Arab kobas.
akụkọ ihe mere emeSociety
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Cuba na mmalite aha ya
Osisi ndi Brazil no na onwu